नेपाल आईडल सज्जा चौलागाईंको बुबा रुँदै मिडियामा, सम्झीए पुराना दिन ! आफ्नै घरमा बस्ने ठूलो सपना (भिडियो) – Eshankharapur
मुख्य पृष्ठ /News/नेपाल आईडल सज्जा चौलागाईंको बुबा रुँदै मिडियामा, सम्झीए पुराना दिन ! आफ्नै घरमा बस्ने ठूलो सपना (भिडियो)
नेपाल आईडल सज्जा चौलागाईंको बुबा रुँदै मिडियामा, सम्झीए पुराना दिन ! आफ्नै घरमा बस्ने ठूलो सपना (भिडियो)
काठमाडौं, भदौ / गायन रियालिटी शो नेपाल आइडल तेस्रो सिजनको उपाधी सज्जा चौलागाईं चुमेका छन् । सबैभन्दा धेरै भोट प्राप्त गरेर बिजेता बनेका हुन्नेपालको पहिलो नेपाल आइडल पोखराका बुद्ध लामा बनेका हुन् भने दोस्रो नेपाल आइडलको उपाधी रवी ओडले चुमेका हुन् ।
एपी वान एचडीबाट हरेक हप्ता बिहीबार र शुक्रबार प्रसारण हुँदै आएको यो रियालिटी सो नेपाली सांगीतिक इतिहासको सर्वाधिक रुचाइएको कार्यक्रम हो। प्रतिस्पर्धाको उत्कृष्ट ३ मा सज्जा चौलागाईं, प्रवीण बेडुवाल र किरणकुमार भुजेल पुगेका थिए ।
हजारौंबाट छानिएर उत्कृष्ट ३ मा पर्न सफल भएका उनीहरूले पाएको भोटको आधारमा विजेता चयन गरिएको हो । विजेताले ‘नेपाल आइडल-३ को उपाधिसहित ५० लाख रुपैयाँ पुरस्कार प्राप्त गर्नेछ। यसैगरी फस्ट रनरअपले १५ लाख र सेकेन्ड रनरअपले पाँच लाख नगद प्राप्त गर्नेछन्।
अन्य हप्ताको कार्यक्रम जस्तै शुक्रबारको कार्यक्रममा सीमित मानिस र दर्शकको उपस्थितिमा नेपाल आइडल-३ को विजेता घोषणा गरिने प्रोजेक्ट हेड सुरेश पौडेलले जानकारी दिए।
पौडेलका अनुसार कोभिड-१९ का कारण ग्रान्ड फिनाले सामान्य तवरमै सञ्चालन गर्न लागिएको हो। लकडाउन भएको थिएन भने गत चैतमै कार्यक्रम सम्पन्न भइसक्थ्यो। कोरोनाका कारण रोकिएको कार्यक्रम करिब तीन साताअघि पुनः सुरु भएको थियो। कार्यक्रमको निर्णायक मण्डलमा इन्दिरा जोशी, न्ह्यु वज्राचार्य र कालीप्रसाद बाँस्कोटा रहेका छन्।
नेपाल आइडल यस्तो एउटा मञ्च हो जसले हर कोहीलाई अवसर दिन्छ। यसले दूरदराजमा लुकेर रहेका प्रतिभालाई अगाडि बढ्न समान अवसर दिन्छ। नेपाली सांगीतिक इतिहासमा बेग्लै उचाइ कायम गरेको नेपाल आइडल हरेकको सपना हो। यसअघि बुद्ध लामा र रवि ओडले यो उपाधि चुमिसकेका छन्।
जतिबेलापनि सेना प’रिचालन हुँदैन : प्रधानसेनापति थापा